काठमाडौंको अवस्था चि.न्ताजनक: सबैभन्दा धेरै मृ,त्यु बानेश्वर क्षेत्रमा !
काठमाडौंको अ,वस्था चि,न्ताजनक: सबैभन्दा धेरै मृ,त्यु बानेश्वर क्षेत्रमा !
२०७७ भाद्र ८, सोमबार ११:०७
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा विहिवारसम्म करिव ३ हजार स,क्रिय सं,क्रमित पुगेका छन् । पछिल्ला केही दिनमा दैनिक एक सय पचास देखी दुई सयसम्म सं,क्रमित फेला पर्न थालेपछि स्थिति ग,म्भिर बन्न थालेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पछिल्लो त,थ्यांकले काठमाडौंको अवस्था अ,त्यन्तै चि,न्तित बनेको बताएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
मानिसहरुले अटे,री गरिरहने हो भने अझै पनि भ,यावय अवस्था आउने चि,न्ता व्यक्त गरेको छ । आइतवारसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने उपत्यकाका तीन जिल्लामा २ हजार ९६५ स,क्रिय सं,क्रमित रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा रहेका छन् । भक्तपुर र ललितपुरको तुलनामा काठमाडौं जिल्लामा ज,नसंख्या अ,त्या,धि,क रहेको छ ।
सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने उपत्यकामा करिव ५० लाख व्यक्ति बसोबास गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा आइतवारसम्म २ हजार ३६८ स,क्रिय सं,क्रमित रहेका छन् । ललितपुरमा ३६६ र भक्तपुरमा २३१ रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । अहिलेसम्म उप,त्यकामा कुल सं,क्रमितको संख्या ३ हजार २६२ पुगेको छ । तर, सं,क्रमित निको हुने दर भने तथ्यांकले न्यु,न देखाएको छ । हालसम्म केवल २९७ जनामात्रै नि,को भएको देखाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा सं,क्र,मणको स्त,र भ,यानक रहेको छ । काठमाडौंमा मात्रै शनिवारसम्म १ हजार ६०६ जना सं,क्र!मित फेला परेका छन् । ३२ वटा वडामध्ये दुई वडामा १ सय भन्दा बढि सं,क्रमि,त फे,ला परेका हुन् । वडा नम्बर ३२ कोटेश्वरमा १२३ र वडा नम्बर २ महाराजगञ्जमा ११९ जना सं,क्रमित छन् । शनिवारसम्म महानगरमा को,रोना सं,क्रमित ८ जनाको मृ:त्यु भएको छ ।
काठमाडौं महानगरले तयार पारेको तथ्यांक अनुसार मृ:त्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै वडा नम्बर १० बानेश्वर क्षेत्रका छन । बानेश्वर क्षेत्रमा को,रोना सं,क्रमित ३ जनाको मृ:त्यु भएको छ । त्यस बाहेक वडा नम्बर २७ महावौद्धमा २ जना, वडा नम्बर ४ बालुवाटारमा १ जना, वडा नम्बर १२ टेकुमा १ जना र वडा नम्बर २० भीमसेनस्थानमा १ जनाको मृ:त्यु भएको महानगरले जनाएको छ ।